Netflix ရှိအချစ်ရာသီ ၃ - အပြည့်အဝမူးယစ်ဆေးဝါးစောင့်ကြည့်သည့်လမ်းညွှန် - Netflix သတင်း
Credit: ချစ်ခြင်းမေတ္တာ - Suzanne Hanover - Netflix
Netflix အသစ်ဖြန့်ချိမှု (မတ်လ ၉၊ ၂၀၁၈): အချစ်၊ အပေါင်ပစ္စည်းနှင့်အခြားအရာများ ဂျက်စီကာဂျုံးစ်ရာသီ ၂၊ အပိုင်း ၃ ပြန်လည်စုစည်းခြင်းနှင့်အဆင့် - AKA တစ် ဦး တည်းသော Survivor
ချစ်ခြင်းမေတ္တာရာသီ3ယခု Netflix ကအပေါ်စီးဆင်းနေသည်နှင့်ကျွန်တော် Netflix အပေါ်နောက်ဆုံးရာသီမူးယစ်စောင့်ကြည့်နေတယ်ဒါကြောင့်လာမယ့် 12 ဖြစ်စဉ်များအဘို့အကျွန်တော်တို့ကိုလာကြ၏။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်လေထဲတွင်တည်ရှိသည် အချစ် Netflix ပေါ်မှာပါ။ ငါတို့အကြိုက်ဆုံးတီဗီစုံတွဲသည်အသစ်သောဖြစ်ရပ် ၁၂ ခုနှင့်အတူပြန်လာသည်။ ဝမ်းနည်းစရာမှာ၎င်းတို့သည် Paul Rust, Lesley Arfin နှင့် Judd Apatow တို့ဖန်တီးခဲ့သောနောက်ဆုံးထုတ်ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၂ ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Netflix တွင်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးပြသခြင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါပြပွဲအဆုံးကြည့်ဖို့ဝမ်းနည်းနေစဉ်, ငါလုံးဝဝမ်းမြောက်မိပါတယ်နှင့်ငါနောက်ဆုံးရာသီမူးရူး - စောင့်ကြည့်ဖို့ပြင်ဆင်ထားအဖြစ်ငါ့အစာအိမ်လိပ်ပြာနှင့်ပြည့်ဝ၏။
ငါဖြစ်စဉ်များ 12 အသီးအသီးအဘို့အကြှနျုပျ၏ချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှု, ပြန်လည်စုစည်းမှုနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပေးအဖြစ်မူးရူး - စောင့်ကြည့်ရေးအတွေ့အကြုံအဘို့အကျွန်တော်တို့ကိုလာကြ။
ဒီတော့ Gus နှင့် Mickey ကလုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုတစ်သန်းအနည်းငယ်အပိုင်းပိုင်းသို့ကျိုးပဲ့ဖို့ခြောနေလျှင်ကြည့်ရှုရန် 12, မိနစ် 30 ဖြစ်စဉ်များ၏ဤခရီးစတင်ကြကုန်အံ့။
အပိုင်း 1 - Palm Springs Getaway
Gus နှင့် Mickey တို့သည်တီဗွီအချို့ကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားသော်လည်း Bertie နှင့် Randy တို့၏ကြားဖြတ်နှောင့်ယှက်မှုကိုဆက်လက်ခံနေရသည်။ Gus နဲ့ Mickey တို့ဟာအေးအေးဆေးဆေးနေပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေချင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် Randy ကြားတဲ့အခါသူတို့ထွက်ခွာသွားတာကိုစတင်ပြောဆိုကြပြီးသူ့ဝမ်းကွဲကသူတို့အိမ်ပျက်သွားဖို့ Palm Springs ကိုသွားသင့်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။
ထွက်သွားသည်ကငရဲမှခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အိမ်သည် Palm Springs တွင်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Randy ကသူသည်ဤအိမ်ကို ၀ င်ရောက်စီးနင်းခဲ့သော်လည်း Gus နှင့် Mickey တို့သည်ဤခရီးစဉ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ဟုကတိပြုခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကတီဗီကိုအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး။ ရေကန်ထဲကရွှံ့နွံကိုသူတို့သန့်ရှင်းပြီးရင်ရေခဲနေတယ်။
မြေကြီးပေါ်မှာရှိသော Netflix နောက်ဆုံးလူကို
ရယ်မောသံထွက်နေသောအချိန်တွင်ဂတ်သည်ရေချိုးခန်း၌ကိုယ်ပိုင်အချိန်အချို့ရှိသည်။ ရေကူးကန်ကသူ့ဖုန်းကိုဘလူးတုသ်စပီကာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ သို့မှသာလူတိုင်းသည်သူဖုန်းပေါ်တွင်ကြည့်နေသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူအကြောင်းအရာကိုကြားနိုင်မည်။ အဆင်မပြေအကြောင်းပြောဆို!
အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းပြောပြီးဂိုဏ်းကသူတို့ဟာတခြားလူတွေလိုဟန်ဆောင်ထားတဲ့ပါတီတခုကိုဖျက်စီးလိုက်တယ်။ ၎င်းသည် Bertie အပေါ်စိတ်ဆင်းရဲစေပြီး၎င်းသည်သူနှင့် Randy တို့၏တိုက်ပွဲများကို ဦး တည်စေသည်။ Bertie ကအိမ်ပြန်ချင်တယ်ဆိုရင်သူမက Gus မှာထိုးနှက်ချက်တွေတောင်မှရေချိုးခန်းထဲမှာသူလုပ်ခဲ့တာတွေအတွက်သူမကြားဖူးတာကိုတောင်ရယ်ချင်နေတယ်။
သူတို့သည်မြို့မှမထွက်ခွာမီ Randy ၏မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားပစ်ချလိုက်သောအရူးအိမ်နီးချင်း၏ကားလမ်းပေါ်တွင်မီးရှူးမီးပန်းများကိုတစ်မင်ချထားခဲ့သည်။ သူတို့အိမ်ပြန်လာကြသောအခါပြန်ပေးကောင်းငွေရခဲ့သည်။
အပိုင်း 2-3 - အနိုင်ရသူများနှင့်ရှုံးနိမ့်သူ / Arya နှင့် Greg
Mickey သည်အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်ရှိသည်။ သူမသည်ပျော်ရွှင်သည်။ သို့သော်သူမအနေဖြင့်အခြားဖိနပ်တစ်စက်ကျဆင်းရန်စောင့်နေကြောင်းဝန်ခံသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူမရှုပ်ထွေးနေသောကြောင့် Mickey ကိုသူကြိုက်လားဟု Gus ကသိချင်သည်။ သူမစိတ်ရှုပ်ထွေးနေသောကြောင့်သူမကြိုက်ခဲ့သလား။ Gus က macaroni နှင့်ဒိန်ခဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးကိုက်ခဲသည့်အရာသည်အကြီးဆုံးဖြစ်သော်လည်းသင်ပိုမိုစားလေ၊ သင်လိုချင်လေလေဖြစ်သည်။
နေရာမှာဂုပြန်၏အစုအပေါ်ဖြစ်ပါတယ် Witchita ဘယ်လောက် Arya အဖြစ်ပြပွဲများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်မဟုတ်ပေမယ့်သူမဖွင့်ကြီးမားတဲ့ရုပ်ရှင်များတွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူမသည်ပျင်းရိခြင်းနှင့်သူမ၏လိုင်းများကိုမေ့လျော့နေသောကြောင့်သူမနည်းနည်း cocky ပါပဲ။ သူမပထမ ဦး ဆုံးအနမ်းမြင်ကွင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေလို့လား။ သူမသည်သူမ၏ Co- ကြယ်ပွင့်အပေါ်ပြင်းထန်စွာနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်သူတို့၏မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုကျော်သွားကြဖို့ကောင်းတဲ့အစည်းအဝေးရှိခဲ့ပေမယ့်သူမကအခြားမိန်းကလေးနှင့်အတူသူ့ကိုမြင်သောအခါသူမမနာလိုဖြစ်လာတယ်။
ဒေါက်တာ Greg သည်စာအုပ်တစ်အုပ်ထွက်နေပြီးစာအုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးနေစဉ်ပရိသတ်ကြီးရှေ့တွင်စကားပြောရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒေါက်တာ Greg သည်အတုအယောင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်စာအုပ်ထဲတွင်ပစ္စည်းပစ္စယများထုတ်လုပ်ခြင်းတို့အတွက်ခေါ်ယူသည့်လူစုလူဝေးကိုဖြည့်စွက်ရန် Mickey သည် AA အဖွဲ့ဝင်အနည်းငယ်ကိုခေါ်ဆောင်လာသည်။ သူကတစ် ဦး စုစုပေါင်းလိမ်လည်မှုပါပဲ။
Gus အိမ်ပြန် Mickey သို့ရောက်သည့်အခါသူမကသူ့ကိုအခွင့်အလမ်းယူ။ မိမိကိုမိမိအပေါ်အလောင်းအစားရန်သူသည်မိမိရုပ်ရှင်ကိုသငျ့သညျအတှကျအခြိနျကသူ့ကိုပြောပြသည်။ သူကဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ပဲ။ ဒါကကြီးမားတဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်သူ, ဒါကြောင့် Gus ခုန်ယူတော့မည်။
အပိုင်း4- ငါဖျားနာတယ်
နေရာမှာဂု, Randy နှင့်ယောက်ျားတွေထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်တည်နေရာတစ်ခရီးစဉ်ယူပေမယ့် Randy သူကစော်ကားမှုရဲ့ဒါကြောင့်ထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်မုန်း၏။ ဤအတောအတွင်း Mickey သည်နေအိမ်တွင်နေမကောင်းဖြစ်သဖြင့် Gus သည်သူမနှင့်အတူနေရန်ထွက်ခွာသင့်သည်ဟုထင်သော်လည်း၎င်းသည်ဤစမ်းသပ်မှုဟုတ်မဟုတ်မသိပါ။ ခဏအကြာမှာ Gus ဟာဘတ်စ်ကားပေါ်ကနေထွက်ပြီး Mickey နဲ့အတူနေဖို့အိမ်ကို ဦး တည်သွားတယ်။ သူကသူမကိုကျပ်ဝေလငါး၊ လက်ဖက်ရည်ကိုယူလာပေးတယ်။ ယူအက်စ်အပတ်စဉ် Matorey ၏အဆိုအရ Gatorade သည်အပြာရောင်မျိုးဖြစ်ပြီးအဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။
ဤအတောအတွင်းခရီးစဉ်မှယောက်ျားများသည် Michael Myers ကစားသည့် Glenn Michener နှင့်လက်တွဲကြသော်လည်းအမှုအရာများသည်လျင်မြန်စွာနှင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်လာသည်။ Randy ယျတျောနှငျ့နှောင်ကြိုးဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းပါပဲ။
နေရာမှာဂုကောင်းတဲ့ကောင်လေးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ယခုသူနေမကောင်းဖြစ်ပြီးသူကသူ့အတွက် Mickey အပြစ်တင်ခြင်းနှင့်သူမသည်သူ၏အူထဲကထွက် puk ပြီးနောက်သူမအပေါ်စစ်ဆေးမထားသည့်အခါအနည်းငယ်စိတ်ဆိုးရရှိသွားတဲ့။ နောက်ဆုံးတွင် Mickey သည်သူနှင့်အိပ်ရာပေါ်သို့တက်သွားသော်လည်း Musey သည်သူမဖျားနာနေပုံကိုမသိသောကြောင့် Gus သည်ရူးသွားသည်။ သူကတော်တော်လေးအံ was ပေမဲ့သင်တကယ်ဖျားနာတဲ့အခါ၊ Cooler ခေါင်းတွေကနိုင်သွားပြီးသူတို့နေမကောင်းတဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာတောင်းပန်ပြီးအတူတူခိုးသွားတယ်။ သူတို့ကဒီကတဆင့်ရတာပေါ့။
အပိုင်း5- Bertie ၏မွေးနေ့
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရာသီမတိုင်မီက Mickey ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးဤဇာတ်လမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးသြစတြေးလျား Bertie နှင့်ပတ်သက်သော Gus အားလုံး ၀ မတွေ့ရပါ။
အသစ်ကမိန်းကလေး netflix ရာသီ 7
Bertie ၏မိသားစု Skype သည်သူမ၏မွေးနေ့အတွက်သြစတြေးလျမှသူမ၏ဖြစ်သည်။ သူမသည်ထိုနေ့အတွက်မျှော်လင့်ချက်များစွာရှိသော်လည်းသူမ၏ရှုံးနိမ့်ခဲ့သောရည်းစား Randy သည်ကိုလိုရာဒိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပြီး Mickey သည်အလုပ်အင်တာဗျူးအတွက်တစ်ယောက်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံနေသည်။ ဒါဟာအစကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါ။ သူမရဲ့အလုပ်သူငယ်ချင်းကလင်တန်နှင့်ပါတွဲဆိုင်းရန်ပင်ငြင်းပယ်ခံရသောအခါ ပို၍ ပင်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ညံ့ဖျင်းသော Bertie သည် ပို၍ ကောင်းသည်။
ခရစ်သူသည်စားပွဲထိုးအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေသော Smoke House တွင်လှောင်ပြောင်နေသည်။ သူက Bertie ကိုသူမရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်လို့သူမအတွက်အခမဲ့မင်္ဂလာပွဲအချို့ရရှိနိုင်သောကြောင့် Smoke House သို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကနှစ် ဦး စလုံးမိတ်ဆွေဖွဲ့ရန်အပူတပြင်းပါပဲဒါကြောင့်သူမကကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်သူ့ကိုတက်ကြာပါသည်။ ထို့နောက်သူသည်သူမအားဗန်နွိုက်စ်မှမြေအောက်နပန်းသမားများအားခေါ်ဆောင်သွားပြီးနှစ်ခုလုံးကောင်းမွန်သောအချိန်ရရှိခဲ့သည်။ Bertie သည်အသစ်သောအရာများကိုကြိုးစားပြီးဘဝ၏အဓိကအလှည့်အပြောင်းကိုကျော်။ ထွက်ခွာသွားချင်သည်။ ၎င်းသည်ခရစ်အားလက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်နှင့်နပန်းလုံးရန်ကြိုးစားသည်။ ထို့နောက်သူသည် Bertie ထံမှစတန့်သမားဖြစ်ရန်သူ၏အိပ်မက်ကိုအရှုံးမပေးရန်အပြောခံရသည်။
ထိုနေ့သည်ပြီးပြည့်စုံသောနေ့ ဖြစ်၍ ခရစ်သည် Randy ထက်သူမထက်ပိုကောင်းသောဆက်ဆံခဲ့သည်။ Bertie အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ Randy ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းလိုက်တာနဲ့သူမအတွက်ကိတ်မုန့်ကိုတွေ့တော့သူမပconflictိပက္ခဖြစ်နေတယ်။ သူမသည်သူမ၏ဖုန်းမှသူမ၏အကြိုက်ဆုံးမှခရစ်ထည့်သွင်းခဲ့ပါဘူးဒါပေမယ့်သူမလည်း Randy နှင့်အတူကပယ်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ကြောက်တယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းကပိုများနေတယ်လို့တစ်ခုခုပြောပြတယ်။
Gus နှင့် Mickey တို့သည်အိပ်ရာထဲတွင်အလွန်ချစ်စရာကောင်းသောကြောင့်သူတို့၏နံနက်အသက်ရှူမှုကိုပင်နှစ်သက်ကြသည်။ နေရာမှာဂုပြန်သတ်မှတ်ထားပေမယ့်သူကသူ့ရုပ်ရှင်အောင်စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖွင့်သောကြောင့်, သူ့နောက်ဆုံးသင်ကြားရေးအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဒေါက်တာ Greg ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်သူတို့ကသူ့ပြပွဲကူးယူနေထင်သည့်အခါ Mickey နှင့် Stella သူတို့ရဲ့ရေဒီယိုပြပွဲများအတွက်စိတ်ကူးများထွက် hashing အလုပ်မှာဖြစ်ကြသည်။ Mickey ၏ပြပွဲသည်သူ၏ပြပွဲကနေတစ်နာရီလာပြီဖြစ်ပါတယ်သူသည်သူမ၏မှာကြိမ်ဒဏ်နှင့်သူမယခုပြန်ဆုတ်သွားမယ့်ကပြောပါတယ်။ Dr. Greg ကိုငါတို့မုန်းသည်။
Gus နှင့် Mickey တို့သည်ဆစ်ဒ်နှင့်ဂျက်ဖ်တို့နှင့်နှစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံခြင်း ဒါဟာသူတို့ရဲ့ခြောက်လနှစ်ပတ်လည်နေ့ပါပဲ Mickey သည်သူမအလုပ်ကိုပျော်ရွှင်သည်။ နေရာမှာဂုသို့သော်6a.m. မှာအလုပ်မှာဖြစ်ဖို့သူကအကြောင်းမပျော်ရွှင်ပါပဲ။ သူကပင်အိမ်ပြန်လမ်းအပေါ်တစ် ဦး လမ်းဒေါသအဖြစ်အပျက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်တယ်နှင့်သူ၏ကားကို၏ဘေးထွက်ဖျက်ဆီးနှင့်အကြောင်းကို Mickey မပြောခဲ့ပါဘူး။ ဒီတစ်ခါလည်း, Gus တက် messed ရဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။
အပိုင်း6- ညွှန်ကြားချက်
Gus သည်ယာဉ် ၀ န်ဆောင်မှုများမှကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောကီဗင်အားသူ၏ရုပ်ရှင်အသစ်အတွက်အပိုင်းတစ်ခုကိုရေးခဲ့သည် ပထမလ၊ တစ် ဦး ခေါ်ဆောင်သွားသည်းထိတ်ရင်ဖိုအဖြစ်ဖော်ပြထားသောအရာ။ Gus ကရုပ်ရှင်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတိုင်းကိုသူတို့ကိုမိသားစုလို့ထင်ပြီးသူပြောတဲ့အတိုင်းသူငိုခဲ့ဖူးတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။
Mickey ၏မိတ်ဆွေဟောင်း Shaun Mickey သည်သူမရာသီ ၁ တွင်ရေကူးကန်ပါတီရန်ပွဲအပြီးတွင်သူမပတ်ပတ်လည်တွင်ဆွဲထားခြင်းကိုမလိုချင်ပါ။ Mickey သည်သူမနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းတို့အတွက်ညစာစားရန်ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်လိုသည်။ Mickey သည်သူမနှင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ချင်သည်။ Randy သည်အစားအစာကိုပြုလုပ်ရန်စူပါချက်ပြုတ်ပြသမှုကိုနှစ်သက်သည်။ Randy ကအားလုံးကိုဖွင့်သည့်အခါသဘာဝ, ဒီကောင်းကောင်းမသွားဘူး။ Mickey ကသူကြီးပြင်းလာဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာကိုဘရိုင်ယန်ပြောပြတယ်။ ထိုအခါမူကား Bertie က Mickey Dustin နှင့်အတူချိတ်ဆက်ကြောင်း Shaun မှချော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ကြီးမားသောရန်ပွဲကို ဦး ဆောင်လမ်းပြနေသော Shaun သည်ဘရိုင်ယန်မဟုတ်ဘဲသူမ၏ခင်မင်မှုမှကွာရှင်းလိုသောသူဖြစ်ကြောင်းသူမကထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ ဒန်း အရမ်းအေးတယ်
နောက်ကျော Gus '' ရုပ်ရှင်အမှုအရာအပေါ်မှာအားလုံး, ကောင်းစွာမသွားကြသည်မဟုတ်။ မီးတွေပြိုနေပါတယ် Squibs ဖြုန်းတီးလျက်ရှိသည်။ အဘယ်အရာကိုမျှအစီအစဉ်အရသိရသည်သွားသည်။ ဒါဟာနောက်ကျပြီးလူတိုင်းကအဲဒါကိုတစ်ညခေါ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပေမယ့် Mickey က Gus ကိုကျောရိုးအချို့ကိုပြသရန်နှင့်မြင်ကွင်းကိုမှန်ကန်အောင်လုပ်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ သူတို့ကဒီမြင်ကွင်းကိုသံသယဝင်နေကြတယ်၊ ကီဗင်ဟာဂူလိုဝတ်လစ်စလစ်မြင်ကွင်းကိုတောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ခရစ်ကသူ့စတန့်ကိုလုပ်တော့တယ်။
အဆိုပါညစာသည်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော် Bertie နှင့် Mickey တို့၏မိတ်ကပ်နှင့်သူသည် Randy အားသူအချက်အပြုတ်ကျောင်းကိုစဉ်းစားသင့်သည်ဟုပြောသော်လည်းသူကသူတို့ကနောက်နေတာဟုထင်နေသည်။ Randy တစ် dope ဖြစ်ဆက်လက်။
အပိုင်း ၇ - ကောလိပ်မှစာရာ
နေရာမှာဂုနှင့် Mickey သူသည်မိမိရည်းစားဟောင်းသူ Vanessa Bayer ကကစားစာရာသို့ပြေးဘယ်မှာ Leah, သူ့ကောလိပ်ကျောင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာရှိပါတယ်။ ဤသည်တို့သည်ကြီးစွာသောဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်လိမ့်မယ်! ဒါဟာစာရာ Gus များအတွက်ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ထားခြင်းနှင့်အမှုအရာအနည်းငယ်အဆင်မပြေ get ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲ။ Gus စာရာနှင့်သူ၏အကွာအဝေးကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားနေသည်နှင့်သူမ၏ Mickey မိတ်ဆက်ပြီးနောက်, အမှုအရာနှစ်ဆတိုးအဆင်မပြေရ။ Gus နဲ့စာရာအတူတူနေခဲ့ကြတာပါ နှင့် သူတို့စေ့စပ်ခဲ့ကြ! အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ Gus သူကသူတို့အလေးအနက်မဟုတ်ကြဟုဆိုသည်ကြောင့်သူမလိမ်ခံရခံစားရဒီအကြောင်း Mickey ကိုပြောသည်ဘယ်တော့မှ။
စာရာသူမကတစ်နှစ်ကွာရှင်းခဲ့ရဲ့ Mickey ပြောပြသည်။ စာရာကအရိုးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဆိုတာကို Mickey က Gus ကိုပြောပြတယ်။ သူဟာသီချင်းကိုသီဆိုဖို့ကြိုးစားနေစဉ်မှာထာဝရထာဝရမီးလျှံကိုရည်စူးပြီးဒီသီချင်းကိုသင်ကြားဖူးသမျှထဲမှာအဆိုးဝါးဆုံးယစ်မူးနေသောကာရာအိုကေပဲ။ သူမသည်အရက်မူးရှုပ်ထွေးပါတယ်။
နေရာမှာဂုသူမကသူမ၏ကသူ၏တာဝန်ယူမယ့်အရူးသူကို Mickey မပါဘဲစာရာသည်အိမ်ပြန်ပေးသည်။ နေရာမှာဂုစာရာ၏ကွာရှင်းဇာတ်လမ်းကြား၏။ သူမသည်ကလေးတွေနှင့်အတူလက်ထပ်ယောက်ျားသည်အဘို့အကျဆင်းခဲ့သည်။ သူမသည်ကလေးသုံးယောက်ကိုအိမ်တွင်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး အတွက်သူမကိုထားခဲ့သည်။ ကွာရှင်းခံရဖို့ငယ်လွန်းပေမယ့်ချိန်းတွေ့ဖို့နဲ့သူမရဲ့အလုပ်အကိုင်အဘို့အအသက်ကြီးလွန်းလွန်း။ သူမဟိုတယ်အိပ်ရာပေါ်မှာ Gus ဘေးတွင်တည်ရှိသည်အဖြစ်စာရာသည်သူမ၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပိတ်ပင်ထားသည်။ နေရာမှာဂုအချို့အပြစ်ရှိတယ်ခံစားနေသည်။ သူမက Gus သူမထွက်သွားအဖြစ်ထွက် slinks အဖြစ်သူတို့ထဲကတ ဦး တည်းပျော်ရွှင်ကြောင်းသူမပျော်ရွှင်ရဲ့ပြောပါတယ်ပြီးနောက်ဒီတစ်ခါလည်းအချို့သောကိုယ်ချင်းစာ။
အပိုင်း 8 - တန့်ပြရန်
Randy သည်သူ၏ကားထဲတွင်အိပ်နေသည်။ Bertie ထွက်လာသည်။ သူကသူ့တိုက်ခန်းကိုမှန်ရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကသရဲခြောက်တယ်လို့ထင်တယ်။ သူကသူ့နေရာ AirBnb'd ။ သူကငွေရှာဖို့ Witchita အတွက်အပိုအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေတယ်။
ခရစ်စတန့်လေ့ကျင့်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်နေသည်သူသည်မှာစာရင်းစစ်ရပေမည် ရေတံခွန် စတုတ်ပြ။ သူက Bertie ကိုဒီအကြောင်းပြောဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ သူမသည်မိမိအရပျမှရရှိသွားတဲ့သူတို့တက်ချိတ်။ နောက်ဆုံးတော့! ကျွန်တော်တို့ဟာဒီရာသီပရီးမီးယားလိဂ်အပြီးမှာဖြစ်ပျက်တော့မယ်ဆိုတာသိခဲ့ရပါတယ်။
သူ Stella ရဲ့ပြပွဲအပေါ်aည့်သည်ဖြစ်နိုင်လျှင်ဒေါက်တာ Greg Mickey ကမေးတယ်။ သူကထိုကဲ့သို့သောလူရှုပ်ရဲ့ဒါပေမယ့် Mickey ကလုပ်နေတာသို့သူမ၏ပြောထားသည်။ ဒေါက်တာဂရက်ကအမျိုးသမီးများသည်စတူဒီယိုမှမထွက်ခွာမီအမျိုးသမီးများအားလိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။
နေရာမှာဂုသူ့ကိုသူ့ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ဖြစ်ရန်အဘို့အသူမပြုပါလိမ့်မယ်တ ဦး တည်းကြီးမားသောမျက်နှာသာများအတွက် Arya မေးတယ်။ သူမကလုပ်တယ် လှည်းအပြည့်နှင့်ပြည့်စုံယူမှတ်တမ်းတင်မထားဘူးဆိုရင်သူကထွက်လှန်ပေးသည်။
Langhorne Slim & The Law မှပြုလုပ်သော Life's Bell တစ်လုံးနှင့်အတူအံ့ m စရာကောင်းသည့်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုရှိသည်။ ခရစ်သည်သူ၏ Waterworld စာရင်းစစ် nailing ။ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဘားမှာ Bertie နှင့်ပျော်ရွှင်။ နောက်တစ်ခါမစ်ကီဆေးလိပ်သောက် နေရာမှာဂုရုပ်ရှင်နှင့်အတူစိတ်ပျက်။ Randy အစုံအပေါ်မိတ်ဆွေများနှင့်သူ Bertie ဆုံးရှုံးမမျှသဲလွန်စရှိခြင်း။
အပိုင်း9- သင်တို့သည်ငါ၏ Gran Turino ပါပဲ
Gus သည်ရုပ်ရှင်ခေါင်းစဉ်တီးဝိုင်းအားတိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ရန်အတွက်ဂျာကင်အင်္ကျီအသစ်တစ်ခုရရှိသည်။ Mickey သည်သူမမိသားစုနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖိတ်ကြားခြင်းမခံသောကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအချို့ပြဇာတ်တွေရှိပါတယ်။ သူတို့ကပွင့်လင်းတဲ့အိမ်ကိုသွား။ Gus Mickey ဆေးလိပ်သောက်မြင်သည်။ သူမသည်သူမကသူမသောက်ရန်အမိန့်ပေးပေမယ့်မသောက်ခဲ့သူ့ကိုပြောပြသည်။ အနိုင်ရ၊ သင်၏တိုက်ပွဲများကိုကောက်ယူမည့်အချိန်ကိုသိရလိမ့်မည်။ အတူတကွရွေ့လျားခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည်မဟုတ်။ Gus သည် Mickey အားသူ၏မိသားစုနှင့်တွေ့ဆုံရန်တောင်ဒါကိုတာကိုလာရန်လိုသည်။ ဒါပေမယ့်သူမကသူမလာလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်သောအကောင်းဆုံးအဘို့ပါပဲ။
Gus သည်သူ၏ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင်သူမအပေါ်ပြင်းထန်စွာဝေဖန်ခဲ့သည့်အတွက်သူ၏ဖျော်ဖြေပွဲမတိုင်မီသူ၏သူငယ်ချင်းများအားတောင်းပန်ခဲ့သည်။ သူ၏တောင်းပန်မှုကိုသူတို့နားလည်ပြီးလက်ခံကြသည်။
Bertie က Chris နဲ့အိပ်နေတယ်။ လူတွေကိုမကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲစေတဲ့ Mickey နဲ့အတူနေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုရှိတယ်။ Mickey က Dustin အကြောင်းသူမကိုဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးလို့ပြောပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့် Bertie ကသူမနောက်ဆုံးမှာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာသိတယ်။
netflix အပေါ် wentworth ရာသီ5အခါ
ခရစ်က Mickey ကိုအရူးဟုထင်သည် သူမသည်အားလုံးပြီးနောက်ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့စီးကရက်ကိုခိုးယူခဲ့ပေ။
အပြီး ဂရိတ်တူино သီချင်းကအိမ်ကိုဖြိုချသည်။ Mickey ကသူသည်တောင်ဒါကိုတာကိုသွားချင်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။
အပိုင်း 10 - အဆိုပါ Cruikshanks
ဒါဝိဒ်သည်ဂေါ်ပြား Arya ရဲ့အဖေအဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ Arya နေရာမှာဂု '' ရုပ်ရှင်ထဲတွင်မဖွစျနိုငျသဖြင့်, ထိုကွောငျ့, ရုပ်ရှင်ယခုအစားသုံးမိနစ်နောက်တွဲယာဉ်သို့လှည့်ရန်ရှိသည်။ Gus နှင့် Mickey တို့သည် South Dakota သို့ထွက်ခွာကြသည်။
Ed Begley Jr နှင့်ကေသီ Baker Gus ရဲ့မိဘများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့က Mickey သည်သမ္မာသတိရှိကြောင်းသင်ယူသည်။ သေနတ်များနှင့်ကစားပါ။ Mickey ကသူ့အဖေကိုကြိုက်တယ်။ နေရာမှာဂု '' အစ်ကိုကဲန်တစ် smarmy ဇာတ်ကောင်တစ်နည်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကအတူတကွ Cornhole ကစား။ ဘုရားကျောင်းသွားပါ။ Mickey ကသီချင်းသီဆိုခြင်းကိုနှစ်သက်တယ်။
Randy စည်ပိုင်းထဲမှာယိုစီးမှု fix လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ကျောကယ်လီဖိုးနီးယားရှိခရစ်, Bertie ရဲ့အထိပြသထားတယ်။ အဆင်မပြေ!
နေရာမှာဂု '' မိသားစုကသူ့အစ်ကိုကနေစူပါစိမ်အလွဲသုံးစားမှုလာသူ့ကို၏အဟောင်းအိမ်မှာဗီဒီယိုများပြသထားတယ်။ ညီအစ်မကယ်ရိုလိုင်းသည်ပြသပြီးဂတ်စ်နှင့်သူမဂီတပြသခဲ့သည်။
ကဲန်ကသူနဲ့သူ့ဇနီးမျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကဲန်ကဖောက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဂတ်စ်ဟာသူ့အဖေကကလေးယူဖို့အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ သူကလေးတွေရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ သင်၏အသက်ရှူမကိုင်ကြဘူးသူကပြောပါတယ်သောအခါနေရာမှာဂုပါးစပ်၌သူ၏ခြေကိုထည့်လေ့မရှိ။ သူတို့ Mickey ရဲ့rန္ဒြေစောင့်ခြင်း၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုရပါလိမ့်မယ်သည့်အခါသို့သော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေး ye ကို, rs ။ ဤသည်တက်ကွဲဖို့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်! Mickey က Gus ကိုအိပ်ခန်းထဲကနေကန်ထုတ်ပြီးထွက်သွားဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။
Bertie ကသူတို့ခွဲနေသင့်တဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့ Randy ကိုပြောလိုက်တယ်။
အပိုင်း 11 - နှစ်ပတ်လည်ပါတီ
နောက်နံနက်ခင်း။ Mickey သည် LA သို့ထွက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ သူမသည် Gus သူမတည်ငြိမ်သောရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမနှင့်အတူအနာဂတ်ရှိသည်ချင်ပါဘူးထင်၏။
ကဲန်သည်သူ့မိဘများကိုဟာဝိုင်ယီသို့သွားရန်အားလုံးပေးသည်။ အဆိုပါမောင်နှမတိုက်ခြင်းနှင့်အငြင်းပွားမှု။ လူတိုင်းရယ်မောရန်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်ဂုသည်တင်းမာမှုကိုချိုးဖျက်သည်။ Gus '' ညီဖြစ်သူနှင့်သူ၏ညီမ Gus Ridley Scott နှင့်သူ၏ရှက်စရာအီးမေးလ်ကွင်းဆက်အလုပ်လုပ်ဘို့ပုံပြင်အကြောင်းကို Mickey ပြောပြပါ။
Mickey ကထွက်ခွာဖို့အဆင်သင့်ပဲ။ နေရာမှာဂုလိမ်နှင့်သူမ၏ထံမှအမှုအရာစောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။ သူကကလေးတစ်ယောက်လိုလုပ်နေတယ်။ နေရာမှာဂုစင်ကြယ်သောလာပါတယ်။ သူကအလုပ်မှာအရာအားလုံးမှုတ်။ လမ်းဒေါသ။ ဘုရားသခင်ကိုမယုံဘူး Natalie ကသူ့ကိုလှည့်စားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ်ပြောခဲ့တယ်၊ သူကပြီးပြည့်စုံတဲ့ပုံပေါ်ချင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူကတစ် ဦး screwup ပါပဲ။ Mickey ကသူသူ့အဘို့သွားတယ်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်၏။ ဒါပေမယ့်သူကမိသားစုရှိသည်ဖို့အဆင်သင့်မသူဖွင့်။ နေရာမှာဂုအရူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Mickey ကသူသည်ရဲရင့်ပြီးသူ့ကိုနမ်းပြီးသူတို့အတူတူအိမ်ပြန်ကြသည်ဟုထင်သည်။ Mickey က Gus ကိုသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းပြောပြဖို့ပြောလိုက်တယ်။
Phew !!! ငါတစ်မိနစ်အလွန်ကြောက်တယ်ဒီမကောင်းတဲ့ ဦး တည်ချက်အတွက် ဦး တည်ခဲ့သည်ငါဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်ဘူး။
အပိုင်း 12 - Catalina (စီးရီးနောက်ဆုံး)
Bertie Randy နှင့်အတူတက်ချိုးတော်မူ၏။ သူကသဘာဝကျကျ, ကောင်းစွာယူမထားဘူး။
Susan Cheryl က Gus အားသူ့၏ဇာတ်ညွှန်းကိုသူကြိုက်ကြောင်းပြောပြသည်။ ကွန်ယက်သည်ရှေ့ပြေးပုံစံကိုတီထွင်နေသည်။ သူသည် Gus ကိုသိပ္ပံပညာအတွက်ပြသမှုအသစ်တွင်စာရေးရန်ငှားရမ်းလိုသည်။ ဂတ်စရေးသားခြင်းအလုပ်အကြောင်းကို Mickey ပြောပြသည်။ သူတို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အကောင်းဆုံးကိုယူဆောင်လာကြသည်။ သူတို့ကတောင်ဒါကိုတာမှာရှိတဲ့ code ကိုအက်ကွဲခဲ့တယ်။
Gus နှင့် Mickey တို့သည် Catalina ကျွန်းကိုသွားပြီးလက်ထပ်ကြသည် !!!!!
Bertie တက်ရောက်တော့မည်ဖြစ်ပြီး Chris လည်းလာမည်။
Randy သည် Bertie နှင့် Chris တို့ကိုအတူတကွမြင်တွေ့ရပြီးသူတို့အတူတကွရှိနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ပင်အေးခဲသည်။
ပိုများသော netflix:Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီဇာတ်လမ်းတွဲ ၅၀
Mickey နှင့် Gus တို့ကသူတို့ကတိသစ္စာကိုဖလှယ်ကြသည်။ သူမအတွက် bug တွေသတ်ပစ်လိုက်သည့် အချိန်မှစ၍ အချို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်နောက်ကွယ်တွင်စတင်တိုက်ခိုက်ကြပြီး၎င်းတို့ထဲမှတစ် ဦး သည်နှလုံးရောဂါရှိသည်။ သူသော်လည်းအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကပယ်မခေါ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ဒဏ်ငွေလုပ်နေလုပ်နေပါတယ်။ လူတွေလိုကြီးထွားဖို့ကြိုးစားနေသည်။
သူတို့သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူပါတီပွဲသို့ပြန်သွားကြသည်၊ သူတို့သည်တစ်ချက်ခိုး မိ၍ ပင်လယ်ကမ်းခြေ၌ကျွန်ုပ်တို့နောက်ထပ်တွေ့မြင်ရမည့်အရာတစ်ခုခုကိုပြောခြင်းမရှိဘဲပြုံးရွှင်စွာရယ်မောနေကြသည်။ သူတို့လက်ထပ်လိုက်ပြီ!
Gus နှင့် Mickey တို့သည်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာတည်ရှိပြီးထိုမည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်နေရာ၌သင်ရှာဖွေမည်ကိုသင်မသိသောအပြင်ရှိလူအားလုံးကိုမျှော်လင့်ချက်နှင့်အကောင်းမြင်မှုပေးသင့်သောစုံတွဲဖြစ်သည်။ သင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏စီးကရက်များအတွက်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ကျောက်ခဲနှင့်ရနှင့်သင်၏ဟောင်းသူမကသူမဖြိုဖျက်ရန်လိုလားဘာလို့လဲဆိုတော့သူမသငျသညျလိမ်လည်လှည့်ဖြည့်ပြီးနောက်နံနက်စာအသားညှပ်ပေါင်မုရသည့်အခါဒါဟာစတိုးဆိုင်မှာဖြစ်နိုင်သည်။
ငါ Wilco အားဖြင့် Fight ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်မတ်ေတာ၏ပထမရာသီ Gus နှင့် Mickey အနမ်းနှင့်အတူအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ Love ၏နောက်ဆုံးမြင်ကွင်းသည် Wilco မှမင်းနှင့်ငါနှင့်အဆုံးသတ်သည်။
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် Ladybug ရာသီ3ဇာတ်လမ်းတွဲလွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲများ
ဘယ်အချိန်မှာ 100 ၏ရာသီသစ်ထွက်လာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်
မည်မျှရာသီဆရာဝန်၏ Netflix အပေါ်သူကို
ဘယ်နှစ်ယောက်အံ့ lady စရာ Ladybug ၏ရာသီရှိလိမ့်မည်
အင်ပါယာ netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်